यस कारण बनाइयो डा.खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीका अर्थ सारथी | Citizen Post News
यस कारण बनाइयो डा.खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीका अर्थ सारथी
२०७४ फागुन १४ गते १७:५६
काठमाडौँ । नवनियुक्त चार मन्त्रीहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिलाएकी हुन् । शपथ लिने मन्त्रीहरुमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृका यादव र डा. युवराज खतिवडा रहेका छन् । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका पोखरेल रक्षा, थापा गृह, यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र डा. खतिवडा अर्थ मन्त्री भएका हुन् ।
यस कारण बनाइयो खतिवडालाई अर्थमन्त्रीः
डा. खतिवडा पहिलोपटक गैरराजनीति पृष्टभूमिबाट अर्थमन्त्री बनेका हुन् । खतिवडा यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत भएका थिए । वाम गठबन्धन सरकारले गैरराजनीति पृष्टभूमिबाट आएका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । मुलुकको विग्रेको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार्न उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको अर्थ सारथी बनाइएको चर्चा छ । डा. खतिवडा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले अर्थ मन्त्री पदका लागि दुवैले जोखिम उठाएका देखिन्छ । उता नेपाल तरुण दलले सांसद नै नभएका डा.खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
गृहमन्त्री थापाले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेका छन् । यस्तै, एमाले महासचिव पोखरेलसँग पनि पटकपटक मन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका यादवसँग यसअघि बन मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल 'प्रचण्ड'लगायत दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । फोटोः रोशन सापकोटा